ပြိုင်ပွဲမော်ကွန်း — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
လူမျိုး လူမျိုး လူမျိုး လူမျိုး လူမျိုး လူမျိုး လူမျိုး လူမျိုး လူမျိုး လူမျိုး လူမျိုး လူမျိုး လူမျိုး လူမျိုး
ငါအစအဦးအနေဖြင့် Trayvon Martin က Saga နှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်မယ့်. သငျသညျအများတို့သည်လည်းလိုပဲငါသတင်းလွှမ်းခြုံစောင့်ကြည့်, ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရှု, နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကအကြောင်းပြောဆိုသော. ဒါဟာအများပြည်သူစကားလက်ဆုံကြီးစိုးနှင့်အမေရိကတိုက်ရှိမျိုးနွယ်အကြောင်းအများကြီးလိုအပ်နေဆွေးနွေးမှုကိုနှိုးဆျော. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၏အရုပ်ဆိုးအဖြစ်မှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာများများ၏ရှေ့မှောက်၌တွန်းခဲ့သည်, နှင့်ပင်သူတို့ကိုအကအမတည်ရှိပါဘူးဟန်ဆောင်လိုတဲ့သူကအကြောင်းပြောဆိုရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့ကြ.
တစ်ကျော်တစ်နှစ်အကြာတွင်, Trayvon ရဲ့လူသတ်သမားကြိုးစားခဲ့အပြစ်ရှိမတှေ့ခဲ့. ကကျနော်တို့ကိစ္စများမှပေါ်လှုံ့ဆျောပေးသငျ့ဆိုလိုတာ? သူတို့ကသူ့ကိုအပြစ်မဲ့တွေ့ရှိရ, ထို့ကြောင့်ဤ "အပြေးပြိုင်ပွဲကိစ္စများ” ကျွန်တော်သူတို့ထင်သကဲ့သို့အမှန်တကယ်မဖြစ်ရပါမည်, မှန်သော? ဒါကသမ္မာတရားကိုမှထပ်မံမဖြစ်နိုင်. ငါအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်. ငြင်းခုံ၏အဘယ်သူမျှမရည်ရွယ်ပြီ, Trayvon ရဲ့ဇာတ်ကောင်, သို့မဟုတ်ဤကြေကွဲဖွယ်အခွအေနအတွက်စီရင်ချက်, ငါမူကားအချို့ဆွေးနွေးမှုကိုဆက်လက်သင့်တယ်ထင်ပါသလဲ. အဆိုပါတရားခွင်ပြီးဆုံး, ဒါပေမယ့်စကားပြောဆိုမှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး.
ငါသည်ဤအထူးသဖြင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးဤမျှလောက်များစွာသော၏အာရုံကိုဖမ်းထားပြီးအဘယ်ကြောင့်စဉ်းစားမိသူအများအပြားရှိပါတယ်သိ. အချို့သောအနက်ရောင်ရှေးရှေး Trayvon Martin ကနှင့်အတူစာနာဒါကြောင့်အမြန်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်အခြားသူများကတွေးမိ, မိမိ၏ကိစ္စရပ်များကိုခဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း. နောက်ဆုံးတော့,…